Intlanzi yeBubble | Ngeentlanzi
Los intlanzi kwiqamza, ekwabizwa ngokuba yi-bubble-eye fish, zizalelwe e-China, kwaye ziyinxalenye yentlanzi ebomvu. Ukongeza koku, yenye yezona ntlanzi zinomtsalane esinokuthi sizifumane kwaye sinazo kwi-aquarium, kuba phantsi kwamehlo abo onke anesikhumba esigcwele ulwelo, ke kuyabonakala ukuba banamabhamu amabini ekumisweni.
Ngendlela efanayo intlanzi yasezulwinis, ezi ntlanzi ze-bubble zinomzimba omde kakhulu kunye nokusilela kwamaphiko emqolo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iimpahla ezinazo emehlweni abo zinokuba nobukhulu obahlukeneyo kunye nobukhulu. Ngokukhudlwana ii-vesicles, luya lucutha ulusu lwakho. Nangona kunjalo, iimpahla ezinkulu zihlala ziba nzima, ke ezi ntlanzi zincinci ziyanyanzelwa ukuba zichithe ixesha elininzi lokuphumla emazantsi e-aquarium.
Iintlanzi zebubble zinokulinganisa phakathi kweesentimitha ezili-10 ukuya kwezingama-20, kuxhomekeka kuhlobo lomzimba onawo. Kwangokunjalo, iindidi zamaTshayina zihlala zincinci kuzo zonke, ngelixa ezinye iintlobo ezinomzimba omde zihlala zikhulu kwaye zinzima. Khumbula ukuba ukuba ubonelela ezi zilwanyana ngononophelo oluyimfuneko, zazo iingxowa zamehlo Baza kuqhubeka nokukhula ebomini babo bonke, nangona ixesha lokuphila limalunga neminyaka emi-5 ukuya kweli-10.
Kuba, njengoko besesitshilo, le ntlanzi incinci ihlala ixesha elide emazantsi e-aquarium, kubalulekile ukuba igrabile esiyisebenzisayo ijikelezwe, thintela umonakalo onokubakho okanye uqhushululu kwizambatho zakho. Nangona kunjalo, ukuba kukho nasiphi na isiyobisi esigqibeleleyo, esi sidla ngokunyanga ngaphandle kwengxaki. Kwangokunjalo, ukuba kufuneka sizisuse ezi zilwanyana kwi-aquarium, kubalulekile ukuba sithathe amanyathelo okhuseleko, umzekelo, akufuneki sizame ukuzibamba ngomnatha okanye ngesandla, kuba sinokonakalisa iimpahla zabo zamehlo, thina kufuneka uzame ukubabamba ngengxowa yeplastiki okanye isitya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Intlanzi yeBubble
ezi ntlanzi zinqabile kakhulu zikhangeleka ngathi sisiqingatha sentlanzi esonyusiweyo akukho siphoso
Swordtail Xipho Intlanzi